Caddaadis badan oo saaran qiimeeynta xagga da’da ee dhalaanka keli socodka ah | Somaliska
Tan iyo markii la soo roggay in qiimeeyn xagga da’da ah ee lugu sameeyo dhalaanka ama dhalinyaradda keli socodka ah, ayaa waxaa soo baxaya cadaadis badan oo culeys lugu saarayo in la dar geliyo qiimeyntaasi.
Waxaa waqtigu saamaxay oo keliya in la qiimeeyo 1481 qof, kuwaas oo 80% (siddeetan boqolkiiba) la shaaciyey in da’doodu ka weyn tahay 18 jir. Haatana laanta socdaalka waxaa ay dib eeggis ku sameeysay 17.000 (toddobo iyo tobban kun ) oo kiis oo dhalaanka keli socodkaasi ah . Laantu waxaa kale oo ay sheegtay markii ay qiimeeysay in cadeeymo dheeri ah loo baahday si loo cadeeyo da’da shaqsiga magangalyo doonka ah, markaana dalab arrintaasi ah dib loogu diray hey’adda sameeysa daaweeynta sharciga. Kulanka toddobaadka siyaasadda ee Almedalen ayaa lugu soo bandhigay warbixin sheegeysa in 5966 (shan kun sagaal boqol lixdan iyo lix) kiis oo la xirriirta qiimeeynta da’da la soo bandhigay, waana tirro kale oo la soo bandhigo tan iyo markii howshan lugu dhawaaqay sanadkii hore.
Dhinacak kale laanta socdaalka ayaa sheegtay in qiimeynta da’da ay tahay mid ciddii doonta sameeyn karta balse laantu go’aan ka gaari gaareeyso kiiska qofka diida. Sidaana waxaa tilmaamay Daneil Salehi oo madax ka ah qeybta isbadaladda ee laanta socdaalka.
Tirro koobkii la sameeyey ilaa iyo hadda
Lix kun oo kiis oo laanta socdaalka u diray hey’adda daaweynta sharciga ayaa 1.481 ka mid ah dib ugu soo celisay.
180% oo ka mid ah 12.15 qof ayaa daaweeynta sharciga soo sheegtay ineey da’deedu ka weyn tahay 18 jir,taasi macnaheedu waa 1.182 ka mid ah ayaa ah wiilal, halka 33 ay yihiin gabdho.
253 qof ayaa iyagan qiimey lugu sameeyey da’doodu waxaa suuragal ah ineey ka yar yihiin 18, saddex ka mid ah ayaa gabdho ah.
13 ka mid ah ayaa suuragal ah in da’doodu tahay 18 jir ama ay ka weyn yihiin sida lugu xisay tirro koobka, balse tani waxa dhici karta in qolfoofka korkooda uu bisal yahay.
Eed dusha looga tuuray hey’adda daaweynta sharciga
Hey’adan shaqada ku leh qiimeeynta da’da dhalaanka keli socodka ah ayaa jihooyin kale duwan eed dusha uga tuuuray tan iyo markii ay soo baxeen cadeeymihii ugu horeeyey ee ay soo gudbisay. Waxeey ku eedeeyeen in si aan dhameeystirneyn u sameeyn qiimeeyn iyo in magangalyo doonku oo qarka u saaran si aan sax aheyn looga dhigo dad qaan gaar ah. Laakin madaxa hey’adaasi Elias Palm waxaa uu sheegay in aad u khatar yar tahay qalabka la adeegsaday oo ah in qof yar laga dhigo qof wyn, balse ay jirin qalab si sax ah wax u sheega.
Daniel Salehi-naa wuxuu farta ku fiiqaya in qiimeeynta da’da ee ay ka dhigan tahay in maganagalyo doonka ay waajib ku tahay ineey cadeeyaan da’dooda, misna tilmaamay in qaar ka mid ah kuwaasi ayeesan aqoon u laheeyn da’dooda dhabta ah, islamarkaasina eeysan jirin qalab lugu cabiro ama lugu qiimeeyo sida iskuuladda iyo xarrumaha caafimaadka.
Ugu dambeyntiina tan iyo markii sanadkii hore la bilaabay in qiimeeyn xagga da’da lugu sameeyo magangalyo doonka keli socodka ah ee dhalinyaradda u badan ayaa walaac iyo guux ka dhex abuurtay. Waxaana ay keentay in qaar ka mid ah ay is dilaan, inta la og yahay 3 saddex dhalinyarro ayaa nafta iska qaaday, halka qaar kalena dib loogu celiyey dalalkii ay ka yimaadeen.